Erw Tube Mill, Ssaw Mill Tube, Hot dhex mideyso Line, Lsaw tuuboyinka Mill - Wan Run Da
XALALKA warshadaha tuubada
WAN Orod DA SARE FARSAMO CO., LTD of Bazhou City waxaa la aasaasay sanadkii 2001 iyadoo 290 oo shaqaale, 29 injineerada iyo farsamo iyo 7 injineerada sare. Waxaan leenahay in ka badan 100 nooc oo kala duwan oo ah qalab processing iyo 60,000 mitir Square saldhigga saarka.
waxyaabaha Our inta badan waxaa ka mid ah HF dhagax tube alxanka la guutada biibiilaha ka 32mm ilaa 660mm, line HF H-Ray, SSAW Ø219mm ~ Ø3020mm line muquuninta dhagax tube; line kurka ZJ350-2200mm, Kitaabkii duudduubnaa oo qabow la xirrira line dhagax. 90 Waxaa jira nooc oo dhagax tube in la-macmalay sannadkii iyo in ka badan 1200 tan oo rollers in la soo saaray.
HS 400 Direct U samaynta Square iyo Rectangluar Tu ...
H Ray Mill Line Waayo Dhererka 500 Si 800mm H-Ray ...
HS 500 Direct U samaynta Square iyo Rectangluar Tu ...
API biibiile aan xuduud lahayn 5L Gr.B / L245N / L290N / L360N ...
WRD-XJ219 × 8.0mm axdi qarameedka arkay
SSAW Steel tuuboyinka Mill Line Waayo 508-3020 mm
Steel Machine Rinjiyeynta tuuboyinka
Factory Iibinta L New Style Steel gariiradda kurka laga ...